Maxamuud Sayid Aadan: Wasiir Janan waala afduubay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maxamuud Sayid Aadan: Wasiir Janan waala afduubay
September 11, 2019 at 05:12 Maxamuud Sayid Aadan: Wasiir Janan waala afduubay2019-09-11T05:12:33+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Maxamuud Sayid Aadan, Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay jawaabta Dowladda Federaalka Somaliya ay soo siisay ergo ugu tagtey in ay kala hadasho xariga Wasiirka Amniga Jubbaland, C/rashiid Xasan C/nuur (Janan).
Wasiirka Amniga Jubbaland ayaa tan iyo 31-kii bishii August ku xiran xabsi ku yaala Magaalada Muqdisho, ka dib markii laga qabtay Garoonka Aadan Cadde, xilli uu la socday diyaarad transit ku ahayd Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Magaalada Addis Ababa.
Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in odayaal, aqoonyahano iyo ganacsato ugu tagtey Dowladda Federaalka, sidii dib xoriyadiisa loogu siin lahaa Wasiir Janan, ay kala kulmeen sharuudo.
“Dadkii aan dirnay shuruud ayay ku xireen, waxayna ku yiraahdeen arrimo siyaasadeed ayaanu ku heysanaa ee Ciidanka Daraawiishta Jubbaland soo wareejiya, dowladaha deriska ha la macaamilina iyo Jubbaland doorashadeedii ma aqoonsanin dhaha, arrimo sidaas ayay kala hadleen dadkii aqoonyahanada iyo ganacsatada ee u tegay.” Ayuu yiri Madaxweyne Kuxigeenka 1aad Jubbaland.
Madaxweyne Kuxigeenka oo wareysi siiyay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa sheegay inaanay aqbali karin sharuudaha ay Dowladda Federaalka ku xirtay sii deynta Wasiir Janan, sida uu yiri.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa tibaaxay in ay ka xun yihiin sida guracan ee dowladdu ula dhaqantay Wasiir Janan, isagoo intaa ku daray in dowladdu afduubtay Wasiirka.
Maxamuud Sayid Aadan oo sii hadlayay ayaa sheegay inaanay jirin cid war ka haysa xaaladda uu ku sugan yahay Wasiirka, marka laga reebo haljeer oo lala kulansiiyay afadiisa.
“Runtii C/rashiid aad baan uga xunahay sida loola dhaqmay, ninkaas waa la afduubay, wax arkay ma jiraan marka laga reebo xaaskiisa oo muddo 30 daqiiqo ah habeen saq dhexe ay tuseen.” Ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Tallaabada lagu xiray Wasiir Janan ayay dad badani u arkaan mid salka ku haysa khilaafka Dowladda Federaalka kala dhaxeeya Maamulka Jubbaland. Khilaafkan ayaa ka dhashay Doorashooyinkii Jubbaland.
« More aid urged to address displacement in Somalia
Somalia keen to showcase its untapped potential to the world »